कस्तो हो वेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ? - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज कोरोना विशेष कस्तो हो वेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ?
कस्तो हो वेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ?
७ पुष २०७७, मंगलवार १०:४७
बेलायतको दक्षिणपूर्बी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको नयाँ परिवर्तित स्वरूप देखा परेको छ ्र यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस अत्यधिक संक्रामक भएको जनाइएको छ । हाल महामारी ल्याएको कोरोना भाइरसको तुलनामा नयाँ प्रजातिको संक्रामक दर ७० ५ बढी देखिएको बेलायती वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यसको मृत्युदर पहिलेको तुलनामा धेरै छ कि, उस्तै छ कि थोरै छ भन्ने बिषय अध्ययन गर्न बाँकी छ ।
अहिले बेलायतसंग संसारले नै हवाइ सम्पर्क बिच्छेद गरेको छ भने सिमाना जोडिएको फ्रान्सले ४८ घन्टाको लागि आवतजावत बन्द गरेको छ । यसले गर्दा खाधान्न तथा औषधि बोकेका हजारौं लरी सडकमा फसेका छन् । ध्ज्इ लगायत अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले यो प्रजातिको कोरोना भाइरसको अध्ययन सुरु गरेका छन् । केहि दिनमै यो प्रजातिको धेरै विवरण आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
। त्यस्तै महामारीको समयमा सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिमा आत्मबल तथा मानसिक शक्ति प्रबल गराउनु जरुरी हुन्छ ।
हातमा खबरमा प्रकाशित लागि जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेको लेख
अघिको समचार गौरादह मदन भण्डारी फाउण्डेशनमा कार्कीको अध्यक्षमा १६ सदस्यीय कमिटी गठन
अर्को समचार १ नम्बर प्रदेश युवा सञ्जालको बैठक सम्पन्न